Wasiir Goodax: Waan ku dedaaleyna xalka gacan ka hadalka Shabeellaha Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Marko – Mareeg.com: Wafdigii dowladda Soomaaliya u dirtay gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku guda jira kulamo ay la qaadanayaan dhinacyadii ku dagaallay halkaas.
Wafdiga tegay Marko oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, C/llaahi Goodax Barre, wasiirka gaashaandhigga Maxamed Xasan Xaamud, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose C/qaadir Siidii iyo xubno kale ayaa wada dedaallo lagu xallinayo colaadda u dhaxeysa beelaha Biimaan iyo Habargidir.
Xubnaha wafdiga ayaa durbadiiba billaabay wadahadallo gooni gooni ah oo ay la qaadanayaan waxgarad iyo odayaal ka tirsan beelihii dhawaan ku dagaalamay gobolkaasi.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo Federaalka C/llaahi Goodax Barre ayaa sheegay in xukuumadda ay ka go’antahay sidii ay muwaafaqo u dhex dhigi laheyd beelaha walaala ah ee dhawaan ku dagaalamay deegaano ka mid ah gobolkaasi.
“Anaga waxaan u nimid magaaladan qaddiimka ah ee taariikhda dheer leh in noloshii ay caadi ku soo noqoto, waxaan halkan u nimid inaan dhexdooda nabad dhigno beelihii isku qabtay, waxan garowsanahay in waxan wax laga qaban karo, waxan ku dadaaleynaa iney billaabato shaqadii nabadeynta ee beledkan” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka C/llaahi Goodax Barre.
Colaadda labadan beelood ayaa kusoo laalaabtay gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana horay u guuldarreystay heshiiyo nabadeed oo la dhex dhigay, waxaana xukuumadda laga sugayaa iney arrintaan xal u hesho.
Ciidamada ka amar qaata Siilaanyo oo qabsaday Taleex